टी-शर्ट डिजाइन गर्न प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
टी-शर्ट डिजाइन गर्न प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नै कपडा बनाउन चाहनुहुन्छ वा आफ्नै व्यक्तिगत कपडा गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ एक प्रोग्राम छ जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ आफ्नै पोलो शर्ट डिजाइन गर्नुहोस्.
यो प्राप्त गर्न सजिलो छ, बाट डाउनलोड गर्न, र स्थापना गर्न। थप रूपमा, यस कार्यक्रमले तपाईंलाई थ्रीडी मोडेलहरूको साथ तपाईंको आफ्नै फेसन डिजाइन गर्न अनुमति दिन्छ। यो एक कार्यक्रम हो जहाँ तपाईं आफ्नो मोडल अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ, चाहे यो कपालको रंग परिवर्तन गर्ने हो, मेकअपलाई अन्य चीजहरूको माझ; र साथै कपडा, मोडेल, रंग, बान्की, आदि का प्रकार छनौट गर्न सक्षम हुनुको साथै। यो ती व्यक्तिहरूका लागि धेरै उपयोगी कार्यक्रम हो जुन आफैं, परिवारका सदस्यहरू, बेच्न वा उपहारको रूपमा दिनको लागि आफ्नै टीशर्टहरू बनाउन चाहन्छन्।
यी सबै र केहि अन्य चीजहरू हामी प्राप्त गर्न सक्दछौं, धन्यवाद भर्चुअल फेशन प्रोफेशनल, जुन चाहिँ free र यी केसहरूमा अत्यन्त उपयोगी छ। यस कार्यक्रमको हाइलाइट गर्ने अर्को विशेषताहरू यो हो यो हो Español त्यसो भए तपाईको कुरा बुझ्न यो सजिलो हुँदैन कार्य गर्दै एक पटक यसको भित्र हुनु
1 मोबाइल अनुप्रयोगहरू
2 कम्प्युटर को लागी कार्यक्रम
3 अनलाइन पृष्ठहरू
4 कसरी टी-शर्ट डिजाइन गर्ने
5 टी-शर्टहरू डिजाइन गर्न कति खर्च हुन्छ?
टि-शर्ट डिजाइन गर्नु भनेको हामीले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि गर्न सक्दछौं। त्यहाँ अनुप्रयोगहरू छन् जुन यो सम्भव बनाउँदछ, त्यसैले यो विचार गर्न अर्को राम्रो विकल्प हो किनभने धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो फोनबाट यसलाई गर्न सक्षम हुनु धेरै सरल छ। Google Play मा उपलब्ध विकल्पहरूको एक जोडी छन्, जुन यस सम्बन्धमा रूचि हुन सक्छ।
पहिलो हो तपाईको टी-शर्ट डिजाइन र प्रिन्ट गर्नुहोस्, जुन एक साधारण सरल अनुप्रयोग हो जुनसँग हामी हाम्रो रुचिमा टी-शर्ट डिजाइन सिर्जना गर्न सक्छौं। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई पछि फाइल वा ढाँचा सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन पछि मुद्रण गर्न सक्षम हुनेछ, ताकि यसले हामीलाई उल्लेखनीय तरिकामा यस प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। अनुप्रयोगको डिजाइन सरल छ र राम्रोसँग काम गर्दछ। यो Google Play बाट नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ:
तपाईंको टी-शर्ट डिजाइन र प्रिन्ट गर्नुहोस्
अर्कोतर्फ हामीसँग टी-शर्ट डिजाइन छ - स्न्याप्पी, जुन सम्भवत यस क्षेत्रको सबै भन्दा राम्रो परिचित र अनुभवी हो। यसले हामीलाई स्क्र्याचबाट अनुकूलन टी-शर्ट डिजाइन गर्ने संभावना प्रदान गर्दछ। हामी यस अर्थमा हामीले चाहेको कुराको छनौट गर्न सक्षम हुनेछौं, रंग, बान्की वा अन्तिमबाट। यसैले तपाईको आफ्नै डिजाइन गर्नु सरल छ। यो एन्ड्रोइडमा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ:
टी-शर्ट डिजाइन - स्न्यापी
विकासकर्ता: स्न्यापी लिमिटेड
कम्प्युटर को लागी कार्यक्रम
यदि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटरबाट शर्ट डिजाइन गर्न चाहानुहुन्छ, केही प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्न पनि सम्भव छ। तिनीहरूको अपरेशन हामीसँग फोन अनुप्रयोगमा रहेको जस्तो छ, केवल यस अवस्थामा हामी कम्प्युटरमा प्रोग्राम प्रयोग गर्दछौं। तिनीहरूले हामीलाई सम्पूर्ण अनुप्रयोग डिजाइन प्रक्रिया पूरा गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि हामी १००% कस्टम टि-शर्टको मजा लिन सकौं।
यस अवस्थामा, छनौट त्यति विस्तृत छैन, यद्यपि त्यहाँ एक कार्यक्रम छ जुन ठूलो चासोको विषय हो, डेस्कटप टी-शर्ट क्रिएटर के हो?। यो प्रोग्रामले हामीलाई कम्प्युटरबाट सजिलैसँग आफ्नै टी-शर्टहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ। हामी डिजाईनको बारेमा सबै कुरा अनुकूलन गर्न सक्दछौं, जब सम्म हामीले चाहेको पाउँदैनौं। प्रयोग गर्न सजिलो र विचार गर्न राम्रो विकल्प।
यो विकल्प हो जुन समयको सब भन्दा बढि बढेको छ। हामीसँग भेट्यौं डिजाइनहरू सिर्जना गर्न धेरै वेब पृष्ठहरू पूर्ण निजीकृत टी-शर्ट को। यस सम्बन्धमा त्यहाँ धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन् भनेर हेर्नको लागि केवल गुगल खोजी गर्नुहोस्। थप रूपमा, तिनीहरूमा अपरेशन समान छ, त्यसैले हामी यस सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू हुनेछैनौं।
सब भन्दा लोकप्रिय मध्येको एक Teespring हो, हामी यो लिंकमा के देख्न सक्छौं। यस पृष्ठमा हामी आफूले चाहेको डिजाईन सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछौं, टी-शर्टको बिभिन्न शैलीहरू बीचको छनौट गरेर, हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं रंगहरू र हामी यसमा राख्न चाहन्छौं भने त्यो पाठ पनि सिर्जना गर्दछौं। यो सबैले १००% निजीकृत डिजाईन अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, हामी थपेका अतिरिक्तहरूमा निर्भर गर्दछौं, हामी यसको मूल्य देख्न सक्दछौं जुन शर्टको लागत लाग्नेछ।
T-shirtimedia, यो लिंकमा उपलब्ध छ, यो बजार क्षेत्रमा विचार गर्न अर्को विकल्प हो। यसले हामीलाई मनपर्ने टी-शर्टहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना दिन्छ। यो राम्रो वेबसाइट हो यदि हामी धेरै एकाईहरू सिर्जना गर्ने विचार राख्छौं, उदाहरण को लागी यदि यो एक विशिष्ट घटना को लागी हो भने। प्रयोग गर्न सहज र सामान्य मूल्यमा राम्रो मूल्यको साथ।
स्प्रेडशर्ट तेस्रो वेबसाइट हो जुन हामीले उल्लेख गर्यौं, जुन विचार गर्न अर्को राम्रो विकल्प हो। यसले शर्टमा हामीले चाहेको डिजाईन सिर्जना गर्ने सम्भावना दिन्छ। थप रूपमा, यो सजिलै प्रयोग गर्न मिल्ने वेबसाइट हो, सबै प्रकारका व्यक्ति (वयस्कहरू वा बच्चाहरू) का लागि टी-शर्ट सिर्जना गर्न सक्षम हुँदै। हामी शर्टको बारेमा सबै चीज पनि छनौट गर्न सक्छौं, जस्तै सामग्रीहरू। यो पनि एक पारिस्थितिक टी-शर्ट सिर्जना गर्न अनुमति छ, जो पक्कै पनि चाखलाग्दो छ। एक उत्तम विकल्प, जुन तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी टी-शर्ट डिजाइन गर्ने
प्रक्रिया प्राय सबै वेब पृष्ठहरूमा समान हुन्छ। हामीले गर्नु पर्छ पहिले केही पक्षहरू छनौट गर्नुहोस्जस्तै सामग्री जुन हामी शर्टमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं र यसको रंग। ताकि प्रत्येक उपयोगकर्ताले चाहेको विकल्प छनौट गर्न सक्दछ। त्यहाँ केहि पृष्ठहरू छन् जुन अधिक रंगहरू छन्, तर सामान्यतया यो सामान्यतया समस्या हुँदैन।
सामान्य कुरा यो हो कि यसलाई सँधै व्यक्तिगत टेक्स्ट सिर्जना गर्न अनुमति दिइन्छ, फन्ट छनोटको सम्भावना सहित। हामी यसमा फोटो वा लोगोहरू पनि परिचय गर्न सक्दछौं, जुन धेरै जसो कम्प्युटरबाट हामीले कम्प्युटरबाट अपलोड गर्नुपर्नेछ, त्यसैले हामीले सेभ गरिएको फाईल पाउनु महत्त्वपूर्ण छ जुन हामी यस केसमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं। धेरै जसो पृष्ठहरू वा कार्यक्रमहरूमा पनि तत्वहरू हुन्छन् जुन हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं, यदि हामी आकारहरू परिचय गर्न चाहन्छौं। सामान्य कुरा यो हो कि हामीले प्रयोग गर्नुहुने तत्त्वहरूको मात्राका लागि तपाईंले तिर्नु पर्छ।
यस तरिका मा, हामी यो शर्ट को डिजाइन सबै समयमा हाम्रो मनपर्ने कन्फिगर गर्न सक्दछौं। एकचोटि समाप्त भएपछि, हामी केवल आकार र इकाईहरू जुन हामीले यो शर्टबाट चाहान्छौं छनौट गर्नुपर्नेछ, र यसरी हामी यो व्यक्तिगत डिजाइनको मूल्य लाग्नेछ। धेरै पृष्ठहरू कम इन्धनको मूल्य झुकाव गर्दछ यदि अधिक एकाइहरू अर्डर गरियो भने।
टी-शर्टहरू डिजाइन गर्न कति खर्च हुन्छ?
टी-शर्ट डिजाईन महँगो छैन। धेरै पृष्ठहरू उस्तै मार्जिनमा सर्न को प्रवृत्ति, जुन १० र २० युरो बीचमा हुन्छ। यद्यपि यो धेरै तत्वहरूमा निर्भर गर्दछ, जुन शर्टको अन्तिम मूल्य हुनेछ। एकातिर, हामीले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू निर्णायक हुन्छन्, किनकि केहि महँगो हुन्छन्, विशेष गरी यदि हामी इकोलोजिकल शर्टमा शर्त लगाउँछौं, किनकी केही स्टोरहरूले अनुमति दिन्छ।
रंगले पनि प्रभाव पार्न सक्दछ, किनकि केहि र colorsहरू उत्पादन गर्न अधिक जटिल छन् र त्यहाँ पृष्ठहरू छन् जसले अधिक चार्ज गर्दछ। तर तिनीहरू यस सन्दर्भमा सामान्यतया ठूलो फरक हुँदैनन्। पछिल्लो, तत्वहरू जुन हामीले प्रयोग गर्दछौं, जस्तै फोटोहरू, आइकनहरू, लोगोहरू, आदि।। यसको मतलब भनेको शर्टको मूल्य अधिक हुन सक्दछ। केहि पृष्ठहरू प्रति आईटम चार्ज गर्दछ, जबकि अन्यले हामीलाई एक पटक चार्ज गर्दछ। प्रत्येकको आफ्नै प्रणाली छ।
यी पक्षहरू हुन् जसले यसको मूल्यमा योगदान गर्दछ, तर यसलाई विशेष रूपमा महँगो बनाउँदैन। टी-शर्ट डिजाईन गर्नु सबै जेबहरूको पहुँच भित्र हो। तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नै डिजाइन सिर्जना गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो देख्नुहुनेछ कि यो केहि सरल र सस्तो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » टी-शर्ट डिजाइन गर्न प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस्
जयकोलाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो प्रोग्रामले यसको प्रयोग गर्दछ। धन्यवाद।
PS म शर्ट भन्न को लागी डाउनलोड गर्न चाहान्छु
Yt लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं यो प्रोग्राम कसरी डाउनलोड गर्नुहुन्छ मलाई xfa बताउनुहोस्
प्रोग्राम कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ?
दृष्टिकोण भाई भन्यो
मलाई मग डिजाइन गर्न प्रोग्राम चाहिन्छ जुन प्रोग्राम म प्रयोग गर्न सक्दछु जुन कि न फोटोशप हो न होफम्यान
दृष्टिकोण भाईलाई जवाफ दिनुहोस्
Cloudya: उत्तम क्लाउड फोन प्रणाली